Ukunika amandla ukuthengisa: Ukuvala umsantsa phakathi kweNtengiso kunye neNtengiso
Ukuvala umsantsa phakathi kweNtengiso kunye neNtengiso
NgoMvulo, Matshi 4, 2013 NgoLwesibini, Matshi 5, 2013 UJenn Lisak Golding
Umxholo we Ukutshintsha ifanele yokuthengisa Kukucinga kwenkampani nganye. Inxalenye enkulu yotshintsho yindlela esijonga ngayo kwintengiso, kwaye okona kubaluleke kakhulu, yindlela isicwangciso sentengiso kunye nentengiso ehambelana ngakumbi kunangaphambili. Imibutho kufuneka ihlalutye indlela umbutho wabo osondela ngayo kwintengiso rhoqo ukuze bangalahli nawaphi na amathuba. Ngaba iinguqu zakho kwintengiso ziye kwintengiso zingenamthungo? Ngaba ubonelela ngolwazi olwaneleyo kuwo omabini amaqela? Ngaba ujolise kumathemba afanelekileyo? Le yimibuzo ekufuneka uyibuze rhoqo.
Ukwenza ukuthengisa, ngokoluvo lwam, kuzisa amaqela amabini (ukuthengisa kunye nentengiso) kunye. Idala ubudlelwane bokubambisana, apho impumelelo yenye ixhomekeke kwenye nakwelinye icala. Ngenxa yoko, la maqela aya edityaniswa ngakumbi kwaye enza ukuhamba komsebenzi okuya kuthi kuququzelele ii-handoffs kunye nokugcina abathengi.
Abathengi bethu kwiTinderBox basebenze nemibutho eyahlukeneyo ngokubonelela abathengi nge isoftware yokulawulwa kwesindululo. Izindululo zokuthengisa ziyinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokuthengisa, kodwa bayaqonda ukuba unxibelelwano ngaphambi kokuba umthengisi afike kwinqanaba lesindululo abeke ithoni kubudlelwane obuqhubela phambili. Ngokwenene ukumamela abathengi kunye nokuqokelela idatha kuthengiso kuya kukunceda ungafikeleli kwinqanaba lesindululo, kodwa kuya kukunceda wenze isindululo semithombo yeendaba esityebileyo esibhenela kwimfuno kunye neemfuno zelo themba.
Sisebenze kunye neqela kwiTinderBox ukwenza uphando malunga nokuthengisa okusebenzayo kunye nendlela okuvela ngayo ukutshintsha umdlalo. Ngaba ukhe ube namava ezinye zeentlungu zokuthengisa? Luluphi utshintsho olwenzayo kumbutho wakho ukulungelelanisa ukuthengisa kunye nentengiso?
tags: uqhagamshelwanourhweboUkunika amandla ukuthengisaIzindululo zokuthengisa